तिमी र म, मात्र तिमी र म - शखदा साहित्य
4:23 AM कथा
प्रेम शक्तिको निकास बन्छ । प्रेम बहाव हो । सिर्जनात्मक हो प्रेम । त्यसैले ऊ बहन्छ र तृप्ति ल्याउँछ । त्यो तृप्ति यौनको तृप्तिभन्दा अधिक धेरै मूल्यवान र गहिरो हुन्छ । जसलाई त्यो तृप्ति मिल्यो ऊ फेरि पत्थर खोज्दैन, जसलाई हीरा जवाहरात प्राप्त हुनसक्छ । – आचार्य रजनीश
हृदयमा प्रेमको ताजमहल थियो । प्रेम नै नभए कसरी ताजमहल बन्दथ्यो होइन र ? वरिपरि प्रेमको सुगन्धसहित ताजमहलको सौन्दर्य मगमगाइरहेको थियो । म सोही सुगन्ध लिएर तिम्रो सामु उपस्थित थिएँ । म प्रेषित गर्न चाहन्थे तिमीलाई मेरो ताजमहलको सौन्दर्य । तर त्योभन्दा पहिलो तिम्रा गहिरा के बोलुँला के बोलुँलाझैँ गर्ने आँखाहरूको परिभाषा बुझन् चाहन्थेँ म । म प्रतीक्षारत थिएँ । धेरै बेर बाटो हेरेँ, ती एक जोर आँखाले केही भन्नेछ । पर्खे, सोचेँ, कल्पेँ । तिमीले भन्नेछौ – “तिमी मेरो आर्दश हौ । तिमी मेरो सिद्धान्त हौ । यी दुई आँखा सधै भोका र अतृप्त रहनेछन् । जबसम्म तिम्रो तस्विर यो हृदयमा प्रतिबिम्बित हुने छैनन् । तिमी हावामा पदचाप लिएर कुन बेला आउँछ्यौ मलाई थाहा हुन्न । लाग्छ तिमी यतै कतै घुमिरहेकीछ्यौ । अलिकति वायुको कण भएर सम्झनाको तन्द्रामा अल्झिरहन्छ्यौ । अलिकति दिनको प्रकाश भएर कोठाभरी छरिन्छ्यौ । तिम्रो आकृति जो मेरो स्मृतिबिम्बमा ठोक्किरहन्छ बटुलिन पाएँ भने म आफै आकार लिने थिएँ, तिम्रो स्वरूपसँगै खै कसरी व्याख्या हुन्छ तिम्रो त्यो उपस्थितिको !”
म तन्द्राबाट झस्कन्छु । म अलिकति फुक्छु, तिमी अलिकति खुम्चन्छौ । तिमी अलिकति फुक्छौ म अलिकति खुम्चन्छु । प्रेमको ताजमहल त्यसै बनेन होला । सेता संगमर्मरमा खोपिएको प्रेमको ध्वनि त्यसै बजेनन् होला – एक अर्कामा ठक्कर खाँदै । खै तिमीले सुनेको ? मेरा कानमा यिनै आवाज गुन्जिरहेका थिए । म प्रतीक्षारत थिएँ, तिमीबाट सुनिन । तर मेरो प्रतीक्षा बन्धित बने । प्रेम उत्कर्षको परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क पनि पाउन सकेन विशिष्टताको त के कुरा रह्यो र ? कुरा मोडियो । तिमी मोडियौ । म उही आत्माकाङ्क्षाको दियो कलश बोकेर आरती उतार्ने धुनमा थिएँ । तर खै शुभमुर्हतको कुनै शुभघन्टीसम्म सुनिएन । तिमी यति चिसा हुन्छौ भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। लाग्थ्यो तिमी पग्लने छौ । यी औलाहरूलाई ती हातहरूले कसेर च्याप्नछौ अनि बेस्सरी चुम्नेछौ । आँखाका परेलीले खुसीको वर्षा गराउनेछन् । अनि हामी दुवै फूलमा, साँच्चै फूलको सौन्दर्यमा हराएको हुनेछौँ । साँच्चै फूलको सौन्दर्य कति राम्रो छ हगि ? हामी ढकमक्क भएर फूलहरूमा फुलिरहेका हुनसक्थ्यौ । तर फूलसँगै प्रकृतिले काँडा त्यसै राखिदिएका रहेनछन् । जहाँ फूल छ त्यहाँ काँडा अवश्यै हुन्छ । फूलको अनुभूतिमा काँडालाई बेहोर्न सक्ने क्षमता मानिसमा हुनुपर्छ । सायद यही शिक्षा दिन प्रकृतिले फूलसँगै काँडा पनि राखेका होलान् । साँच्चै काँडाको अनुभूतिले घोच्यो मलाई अहिले पनि तिमी चिसै थियौ । मैले सोचेको थिएँ, साँच्चै तिमीलाई म भन्नेछु – “म नै तिम्रो बिम्ब हु अनि आकृति हुँ । मैले तिमीलाई चिनेको रहेनछु , तिमीले मलाई । यो हृदय सधै खालीखाली रहन्छ । यहाँ तिम्रै गीत कोर्न चाहन्छु अनि यो हृदय तिमीलाई फुकाएर पढ्न दिन चाहन्छु । ती गीतलाई संगीत भराएर गाउन चाहन्छु । तर खै तिमीले कलम चलायौ ? म लेखिन तम्तयार थिएँ । सायद तिमीले ठूलो नदी देख्यौ, तैरन गारो छ । पारि पुग्न गारो छ । पानीमा बाटो कोरिँदैनन् । हिँडिएको बाटो बिलिन भएर हराउन सक्नेछ । त्यसैले तिमीले हृदयलाई दिशाविहीन र आवाजविहीन बनाउन चाहेनौ । किनभने खोलामा जति गीत गाए पनि निरर्थक हुन्छ । खै † तिमी आफ्नै जीवनको धुन बजाउन मस्त थियौ क्यार । म मेरो हृदयलाई सफा कागज बनाउदै थिए । तर तिमी पटक्कै लेखिएनौ । मन निराशनिराश भएर ठूलो खाड्लभित्र भासिँदै थियो । तिमीले एक्कासि आँखामा गहिरो वेदना पोख्यौ । मैले उठाएर अलिकति सँगालेँ । सायद यही हो कि जीवनमा लेखिनु पर्ने कुरा ? मन त्यसैमा अलमलियो । यस्तै जीवनको गति हामी नापिरहेका थियौ“ । नत्र त यहाँ कसको लागि को बनेको छ र ? लाग्यो तिम्रा आँखाले बोलेका कुरा शब्दमा परिणत गरु र हृदयमा लेखूँ । तिमी र म, मात्र तिमी र म अनि यी जीवनका गीतहरू । कतिपय धुन कम्पोज भएर गाइसकेका छन् । कतिपय त्यसै कागजभित्र शब्दमा सीमित छन् । म वारि सडकमा छु । तिमी पारि सडकमा छौ । ट्राफिकले कुनै सिग्नल देखाएन । सायद तिमी बाटो क्रश गर्न रातो बत्तीको प्रतीक्षामा थियौ ।
समय उड्दै गयो, हातबाट छुटेको चङ्गझैँ। सडक व्यस्त रह्यो मेशिन चलेझैँ । तर अझै रातो बत्ती बलेको थिएन । यो समयमा जे घटना पनि हुन सक्थ्यो । तिमी ममा रुपान्तर हुन सक्थ्यौ म तिमीमा । कतै नबलेको ट्राफिकको नयाँ सिग्नल बाल्न सक्थ्यौ । छातीलाई क्षितीज बनाएर सन्ध्या र साँझ दुवैलाई समेट्न सक्थ्यौँ । यो हृदयमा खुसी लहर उठाएर सगरमाथालाई निहुराउन सक्थ्यौँ । बोल्न नसकिएका धेरै कुरा बोल्न सकिन्थ्यो, समेट्न नसकेका धेरै कुरा समेट्न सकिन्थ्यो । अनुभूतिको पहाड बोकेर कतै बिसाउन सकिन्थ्यो । समुद्रका विशाल छालहरूलाई समेट्न सकिन्थ्यो । विद्युतीय तरङ्गले शरीरभरी एक्युपञ्चर गराएर नयाँ तरङ्ग दिन सक्थ्यौ । एउटा आनन्दको भाव, एक उपलब्धिको भाव, शरिरको नशानशामा प्राण भरिन सक्थ्यो । शरिरले एउटा तृप्तिको रस लिन सक्थ्यो धर्ती आकाश एक गरेर । त्यो तृप्ति खै अरु केमा तुलना गर्र्न सकिन्छ र ? म भन्न सक्दिन । ती क्षणहरु कणकणमा बिलाएर त्यो समय जीवित हुनसक्थ्यो ।
तर ––––– तर –––– समयले लोडसेडिङ्गको गीत गाइरह्यो । मेरा भावना अन्धकारमा रुमलिरहेका थिए । हामी शून्य र स्थीर थियौ । म फैलदै गए । अझै पनि मैले मेरो ताजमहलको सौन्दर्य तिमीमा प्रेषित गर्न सकिनँ । मनलाई अधुरो इच्छाको पहाडले थिचिरहयो । मैले मेरा आवाज प्रेषित गर्न सकिन । म इच्छाका हाँगा फैलाएर विस्वासको जरामा उभिरहेकी थिएँ । तिमी कतै बेरिन आउछौ कि भनेर चौबाटो कुरिरहेँ । अहँ पटक्कै तिमी चलायमान भएनौ ।
सायद तिमी पनि ट्राफिक सिग्नलको प्रतीक्षामा थियौ । तर अझै रातो बत्ती बलेको थिएन । तिमी पनि सायद कुनै क्षेप्यास्त्रको प्रहारको आशामा थियौ क्यारे जसले तिम्रो मुटु हल्लाइदिनेछ । तर त्यहाँ युद्धको कुनै शंङ्खधोष भएको थिएन । खाली हात र रित्ता आँखा बाझिरहे बिनाप्रयोजनको हतियार बोकर । तिमी सोच्दै थियो क्यार – ‘यो समयको आव्हान हो । म अलिकति झुक्नुपर्छ, तिमी अलिकति उठ्नुपर्छ ।’ मैले सोचेकी थिएँ – ‘तिमी अलिकति झुक्नुपर्छ म अलिकति उठ्नुपर्छ ।’ तर सबैलाई झुक्नु कहाँ मन् लाग्छ र ? सजिलै आफ्नो हृदय फुकाउन कहाँ मन लाग्छ र ? हृदय पनि त एउटा कम्प्युटर हो नि । कति धेरै जीवनका फाइलहरू छन् । विचारको सफ्टवेयर नमिलाई खोलियो भने भाइरस पस्न सक्छ । सबै फाइलहरु डिलिट हुनसक्छन् । त्यसैले मैले स्वीच अन गरिनँ । तिमीले पनि गरेनौ । समय घुमिरह्यो कम्प्युटर ह्याङ्ग भएर क्रसर घुमेझैँ ।
एकछिन पछि मोबाइल बज्यो । कतै युद्धको वा विस्फोटको कुरा भयो । यो प्रेममय आकाशमा विस्फोटको धुवाँ कहाँबाट आयो ? म अन्यमयस्क बने । यो प्रेमिल संसारमा द्धेष, घृणा, अहंकार र युद्धले कसरी प्रवेश पायो ? यो विज्ञानको उपकरण पनि कोहीबेला निष्प्रयोजन भइदिए हुने नि । मनले मनसँग संवाद गर्यो । ‘मृत्यु ओहो !’ तपाईको मुखबाट निस्क्यो । म डराएँ । मृत्यु अकाट्य सत्य हो तर पनि हामी डराउँछौ किन ? यो भय मृत्युको थिएन आतंकको थियो । भय, आतंक, अहंकार विलिन हुनुपर्दछ, प्रेमोत्सवमा । समय उभिरह्यो । तिमी मलाई हेरिरह्यौ मैले तिमीलाई हेरिरहे । सायद यही नै हाम्रो नलेखिएको गीतको परिभाषा थियो कि ? न सजिलै तिमी मलाई विदाइ गर्न सक्थ्यौ, न सजिलै म तिमीबाट छुटिन सक्थेँ । तिमी सोच्दै थियौ होला – ‘म हिँडेपछि यहाँ मेरो पदचापको मीठो धुन बज्नेछ । मेरो आकृति तिमीसंगै हुनेछ – खाली कोठामा । मुटुको ढुकढुकी बढनेछ । आकृति संजीवतामा परिणत हुनेछ । तिमी मेरो गीतको धुन बजाइरहेको हुनेछौ मेरो अङ्ग्प्रत्यङ्ग लाई संगीतको औजार बनाएर । त्यो मीठो सितारको धुन । यही नै त जीवनको शाश्वता हो कि ! यो प्रेम हो कि यौन ? यौन हो कि प्रेम ? अमरता केमा छ ? यो क्षणिक सत्य अमर हुन सक्ला र ? हामी यसको परिभाषाको अनुसन्धानमा लीन हुनेछौ अनि एउटा अध्यात्मिक तपस्यामा । कतै मीठो संगीतको सा रे ग म बजेको हुनेछ । तिमी ममा, म तिमीमा । यो पल, यो क्षण, यो समय सबै हामीभित्र एकाकार हुनेछ । अनि हामी तृप्तिको आकाशमा निराकार हुनेछौ अनि समय हामीसगै अदृश्य भएर बिलाउनेछ । धेरैले धेरै समय खर्च गरेका छन् यसको परिभाषा खोज्नमा । सायद तिमी पनि परिभाषा खोज्न तल्लीन थियौ क्यार । त्यसैले त तिमी समयको नदी बगाइरहेका थियौ ।
मैले बिदा मागेँ । तिमी छटपटायौ, केही भनुँलाझैँ, केही गरुँलाझैँ गरेर । मैले बाटो हेरेँ । अहिले पनि तिम्रो मानसिकता उही थियो – स्थीर र प्रतिक्रियाविहीन । मैले धेरै बाटो हेरेँ । म रोकिनेछु । समय रोकिनेछ । किनकी यो समय त्यसै आएको थिएन । हामीले धेरै खनजोत गरेका थियौ उर्वरताको लागि । यहाँ उभिनुपर्छ एउटा कल्पवृक्ष । आस्था, विश्वास र प्रेमका प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरेका थियौ । मेरो हृदयमा कतै हरायो त्यो कल्पवृक्ष । सायद यही कल्पवृक्षले डो¥याएको थियो मलाई तिमीसम्म । के अब यो गोरेटो यसरी नै कोरिरहला ? म फर्कन तयार थिएँ । मैले बिदा मांगेँ । तिमी फेरि मोडिायौ, अलिकति पोखियौ । म अझै पनि आशाको आंचल फिजाएर उभिइरहेकी थिएँ । तिमीले गहिरो दृष्टि फयाक्यौ – मेरो आशाको आँचलमा । तर तिम्रा आँखा रित्ता थिए । तिमी फेरि रोकियौ । मनको कल्पवृक्ष मनमा नै थियो । अझै मनमा आशाको दियो निभेको थिएन । तर तिमी अन्तिम पटक मोडियौ फेरि नफर्कनेझै गरी । तिमी सडक पारि थियौ म सडक वारि थिएँ । अझै पनि रातो बत्ती बलेको थिएन, सायद तिम्रो हृदयमा पनि ।
अचानक म मोडिए । मलाई जोडले प्यास लागिरहेको थियो । मभित्र तृष्णा थियो, छटपटी थियो । मैले पानी पिउने आग्रह गरेँ । तिमीभित्र पस्यौ । फ्रिज खोल्यौ । अहिले चिसो पानीको गिलास मेरो हातमा थियो । यो अर्को तृप्ति थियो । तिमीले मलाई हेरिरह्यौ, खै किन हो मैले बुझ्न सकिनँ । सायद आँखा नै सबै कुराको प्रस्थानविन्दु हो कि ! त्यहाँबाट तिमी मेरो हृदयमा लेखिदै थियौ । सायद तिमी पनि समयको त्यो पर्खाइमा थियौ क्यार । मैले आँखा चिम्म गरे । अहिले अघिका कल्पनाका तरङ्गहरू विद्युतीय उर्जा पाएर चलायमान हुन थाले । जीवनको एउटा शाश्वतामा, सत्यतामा हामी रुपान्तरित हुँदै थियौँ । अहिले रातो बत्ति बलेको थियो । सडकहरू सुनसान थिए आवाजविहीन भएर । लगातार बगिरहने हावाबाहेक केही थिएन ।
अचानक दर्के झरि प¥यो । सावनले नौलानौला आकृति लिँदै थोपाथोपामा परिणत ग¥यो हाम्रा खुसीहरूलाई । म रुझिरहे, तिमी बर्षिरहयौ । म वर्षिरह्यौ, तिमी रुझिरहे । धेरै टाढा, अनन्त क्षितिजसम्म हामी भिजिरह्यौ । हामी कही एकान्तमा हराउन पुग्यौँ । आकाश र धर्तीको समागमझैँ । शरीर पानीको कणकणमा रोमाञ्चित भइरह्यो । तिमी र म मात्र तिमी र म । यो धर्तीमा हामी दुइकोमात्र उपस्थिति थियो । बाँकी सबै अस्तित्वविहिन थिए । यो समय रोकिन सक्ला ? अहँ सक्दैन । यो प्रकृतिको नियम हो । तर हाम्रा प्रवृत्तिको अगाडि प्रकृति पनि पराजित भयो । समय एकछिन रोकियो, पर कतै क्षितिजमा फेरि साउने झरीको प्रतिक्षामा । तृप्तिको मीठो उडानमा हामी कही एकान्तमा हराउन पुग्यौँ । साँच्चै तिमी ममा रुपान्तर भएका थियौ र म तिमीमा । तिमी र म, मात्र तिमी र म, सांसारिक अलौकिक आनन्दमा डुबिरहेका थियौँ ।
एकेन्द्र कार्की said...
कथा धेरै राम्रो लाग्यो। मत भाबनामा पो दुबे छु।
तपाइँको लेखन शिल्पी कलात्मक छ । मैले फलो गरेको छु । यहाँ ले पनि गर्नु होला । अनि त अपडेट अाउँछ र पढ्न पनि पाइन्छ ।
धन्यवाद एकेन्द जी अनि शिव जी ,शिवजी तपाइको गजल कथा पनि कलात्मक छन मलाइ मन पर्छ म तपाइको व्लग समय पाएको बेला हेनेछ।
jhandai jhandai mero katha jasto lagyo, i mean malai nai vae jasto lgayo!!!!!!!! Swagat Nepal
dipak acharya damak said...
वा ! क्या दृष्‍टि, क्या शैली, क्या गती, क्या सरलता, क्या मिठाश, क्या सम्योजन,,,,,,,,,,,,,, कथा यती चाडो सिद्धियोकी ,,,,ए हजुर यस्लाई जोडन मिल्दैन ।
Upaj Bhattarai said...
Upaj Bhattarai wow...a beautiful meditative narrative story, if the lines are put in poetic order thanareal poem is created. far fetched ideas are yoked together as in the poetry of john Donne, an English poet. in his poem "A Valediction: Forbidding Mourning" he compares two lovers who are separated, to the two legs ofacompass (mathematical instrument). likewise, the writer compares to the lovers in the two sides of the road waiting for 'red light'. rather than using the traditional images of love the writer creates her own image of love she creates love and their activities with the physical world. use of phallic symbol denotes the excessive desire for physical love... ताजमहल,शुभघन्टी,औलाहरूलाई ती हातहरूले कसेर च्याप्नछौ,काँडा (साँच्चै काँडाको अनुभूतिले घोच्यो),सगरमाथा, खनजोत,एक्युपञ्चर , कलम, (....कलम चलायौ ? म लेखिन तम्तयार थिएँ).these are the symbol that clearly denotes the desire of physical love which is embodied in the phallic use of symbol......it also connotes the desire of being the ultimate man. घन्टी,खनजोत and 'pen and paper' signifies sexual activities from freudian psychoanalytic perspective...
story is very much loaded with the poetic terms that makes it meditative....'ma alikati fukchhu, timi alikati khumchanchhau'.
rather than the external development in the plot there is internal development. there is no clear beginning, middle and the ending..rather the psychological development can be seen.....the story is in the form of 'stream of consciousness' technique,character's thought processes in the form of monologue...as in the prose of james joyce and virginia woolf.
beautiful piece of writing....
sarita rai said...
story ati ramro6 ma ta afaima po dubna pugechu. tara auta kura maile bujhna sakina hai plz ans dinu hola la.
katha ma dubai patra wari pari red light ko waiting ma hunuhun6 tara pachi last ma puna bhannu bhako6 '' achanak ma modiye malai pyas lageko thiyo..................................pani piune agraha gare timi bhitra pasyau fridge bata chiso pani diyeu ani malai chup chap heri rahayeu'' bhannu bhako6 i mean pari sadak ma bhako kta patra saga tapai kti patra modine bitikai kasari pari ko manche tapai ko side ma aipugyo ta?????????????????? please clear garidinu hola............
सरिताजी यो कथा कवितात्मक कथा हो । यहा विम्वहरु प्रयोग गरिएको छ । जस्तै दर्के पानी पर्यो भनेको साच्चै पानी परेको होइन यो त्यस्तो अनुभूति मात्र हो । त्यस्तै पारि सडक र वारि सडक भनेको ति दुइ पात्र बीच दुरी छ भनेको हो ।
pratigya dhami said...
hello sarmila bahinee,
tapaika rachana atinai ramra chan sabdama khelna sakne gun6tapaima. ma pani kalam chalauchu sahitya lekhiyeka chang thuprai6n masaga pani tara ma tapaiko jasto sabdama khelna ra naya naya sabda jandina..kasari naya ramra sabda janna sakin6 hola ani bimba haruko prayog kasari garna sakin6?
k teso bhaye kta patrale tapailai chiso pani fridge bata deko chai kalpanako bimba use garnu bhako ho jabaki tyo kta patra tada pari nai6...
sadak wari pari bhaneko patra bicha duriho bhannu bhako6?